Indaba Yethu | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Indaba yethu
Ryan Salazar, uMsunguli Sakaza i-Beat Magazine
I-brainchild yezamabhizinisi e-up-and-coming uRam Salazar, u-Broadcast Beat uthatha ama-niches ukuthi ezinye izitolo zishiye eceleni futhi zamukela izimakethe ezintsha kanye nobuchwepheshe obusungulayo. "I-Broadcast Beat Magazine yenzelwe ukunikeza wonke umuntu izindaba zomkhakha njengoba kwenzeka," kuthinta Salazar. “Cabanga, amakhulu wabakhiqizi abahamba phambili kanye namafemu ezobudlelwano bomphakathi… konke kuthontshelwe endaweni eyodwa ukuhlanganyela izindaba zomkhakha wephula! Ngaphezu kwalokho, iBroadcast Beat inababhali babasebenzi ababhala okuqukethwe kwangempela nsuku zonke. Laba babhali babhale cishe yonke into ehamba phambili yokuphrinta ne-e embonini! ”
Ukudalwa kokuqukethwe, ukuphathwa kokuqukethwe kanye nokulethwa kokuqukethwe - KONKE KUMBONIWE! Okuqukethwe kuyisihluthulelo ekuhwebeni kwemidiya nokwazi umthombo owodwa wakho kubaluleke kakhulu. Bathi ukwazi yingxenye yempi - sikubekele leyo ngxenye Bese kuthi abanye!
I-Broadcast Beat isivele ingene esikhundleni sezincwadi ezindala ezazikhipha izindaba zokukhiqiza ziphrintiwe njengesixhumanisi. Asizukuphuma kuphela siyothola izindaba - zilethwa ngqo kuwebhusayithi yethu! I-Broadcast Beat ihlanganisa yonke imibukiso yezimboni emhlabeni wonke futhi ezimweni eziningi, ngokutholakala kwevidiyo eku-inthanethi ngqo kusuka phansi kombukiso.
“Sinokuxhumana nazo zonke izinkampani eziphezulu zobudlelwano bomphakathi, abasakazi nabakhiqizi, kufaka phakathi izinhlangano ezinjengeNational Association of Broadcasters (NAB), Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE), INational Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) nokuningi, ”kusho uSalazar.
Imboni idinga izwi - futhi iBroadcast Beat ikhona ukuyinikeza. Ngaphandle kwakho konke okuqukethwe okulindele kusuka emithonjeni othembele kuyo manje noma esikhathini esedlule, abafundi bayakujabulela ukubona ukugcwala kakhulu kwezinto ezisukela kwezobuchwepheshe kuya kwesikhashana nakuyo yonke indawo ephakathi. I-Broadcast Beat ibheka ubuchwepheshe obusha nobusafufusa futhi iyethula ngombono obathakaselayo labo abasembonini nalabo abangaphandle.
Ucabanga ngokushintsha imisebenzi ngaphakathi kwemidiya? I-Broadcast Beat inezinhlu zemisebenzi eshisayo engeke ihehe iso lakho kuphela kepha engakubeka esigabeni se- "movers-and-shakers" futhi ikhuphule umholo wakho! Thola umsebenzi ophelele ongeke uvumelane nawe kuphela kodwa futhi ube ngumdlalo ofanele womsebenzi wakho omusha! Cross-train ukwandisa kokubili ulwazi lwakho nesisekelo nesipiliyoni kodwa futhi nesisekelo sakho sezimali! Umsebenzi uphandle lapho - YENZA MANJE ushintsho lube ngcono!
Ngenkathi ibinzana elithi “Ifu” livela futhi libonakala lisetshenziswa ngokweqile ngokushesha isikhangiso, ikusasa lokuqukethwe kwemidiya nokufeza okufunwayo kumadivayisi weselula namakhompyutha kuncike efwini ukuze kunikeze umthengi wanamuhla lokho abekade ekufuna - okuqukethwe nini futhi kuphi lapho kufaneleka khona ukuyibuka. Ngiyingxenye yenhlangano enkulu ethintekayo ngefu - ukuqwashisa ukuthi iyiphi i-Broadcast Beat ezosiza ukusabalala.
Izindawo eziningi kakhulu, kuningi ongazemboza - kepha i-Broadcast Beat izobe ikhona ukuqinisekisa ukuthi ukhona! Izindaba zansuku zonke zizokusiza ukukugcina usesikhathini embonini yemidiya eguquguqukayo kusuka ekushintsheni okuncane kakhulu kuya kuzinguquko ezinkulu! Ngababhali abanolwazi abakwenza wazi kahle njengoba kufanele ube semakethe yezindaba! Kunomsebenzi omningi okufanele wenziwe - ngakho-ke okwamanje, gcina imininingwane yakho ingeyamanje futhi uhlale ungene kuma-blog!